ကျနော် နှင့် ဘောလုံး ( ၁ ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » ကျနော် နှင့် ဘောလုံး ( ၁ )	19
ကျနော် နှင့် ဘောလုံး ( ၁ )
Posted by တောင်ပေါ်သား on Jun 19, 2015 in Creative Writing, My Dear Diary | 19 comments
ဘောလုံးကို ကျနော် ဘယ်တုန်းက စ စိတ်ဝင်စားခဲ့တာလဲ ? သိပ်မမှတ်မိချင်တော့ ၊
ကျနော့ အဖေက ကချင်ပြည်နယ် လက်ရွေးစင် ဖြစ်ဘူးသလို အဖေ့ညီက အကောက်ခွန်အသင်း လက်ရွေးစင်ဗျ ၊
ဒီတော့ ကျနော့သွေးထဲမှာလည်း ဘောလုံးသွေးက ပါမပေါ့လေ ၊
ဘောလုံးသမား ဖြစ်ခဲ့သလား ? နိူး ၊ ဒါဆို ဘောလုံးကော ကန်ခဲ့ဘူးလား ? ရက်စ် ဘုရားစူး တစ်ခါကန်ဘူးတယ် ၊
ဆင်မလိုက်သင်္ဘောကျင်းဝန်ထမ်းဘဝ ၊ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှုးဒိုင်း ဆိုပြီး သင်္ဘောကျင်း ဌာနအသီးသီး နဲ့ အလုပ်ရုံတွေ ပြိုင်ကြတာ ၊
ကျနော်က စက်တပ်ဆင်ရေးအလုပ်ရုံအသင်းက အရန်ကစားသမား ၊ ဟီး ဟီး အဲသလောက်ခြေစွမ်းရှိတာ ၊
အဲဒီပွဲမှာ ကျနော်တို့အသင်းက ဆီမီးဖိုင်နယ်အထိရောက်တယ် ၊ ကျနော်ကတော့ တစ်ခါမှကို ဝင်မကန်ရသေးဘူး ၊
ဘောကန်ဘိနပ် ဝယ်ပေးတဲ့ အမေကတောင် သူ့သားတော်ကြီးကို အတော် စိတ်ပျက်လောက်တဲ့အထိ ၊
အဲ ဖြစ်ချင်တော့ တည်ဆောက်ရေး ၁ အသင်းနဲ့ ကန်ရတဲ့ ဆီမီးပွဲက အကြိတ်အနယ်မို့ နာလို့ ထွက်ရသူတွေ ရှိလာရော ၊
အဲဒီမှာ အသင်းနည်းပြပေါ့ဗျာ ၊ အလုပ်ရုံအင်ဂျင်နီယာက ကဲ မျိုးသန့်ရေ သွေးပူလေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ထား တဲ့ ၊
ကျနော်ကလည်း ပြည်နယ်တိုင်း ဘောလုံးပွဲတွေမှာ မြင်ထားဘူးသလို ကွင်းထဲမဝင်ခင် ဟိုပြေး ဒီပြေးပေါ့ဗျာ ၊
အဲ လူစားဝင်ရမှာက တိုက်စစ်မှုးနေရာ ၊ နင့်အမေလခွား ပြေးလိုက်ရတာ တယ်မောသဗျာ ၊
ဒူးယားစီးကရက် နဲ့ နှင်းဆီဆေးပေါ့လိပ် တန်ခိုးတွေပေါ့ ၊
အဲဒီအချိန်မှာ ပွဲက ဇီး ဇီး နဲ့ သရေကျနေတုန်း ၊ မိနစ် ၉၀ ကလည်း ပြည့်တော့မယ် ၊
အားကောင်းမောင်းသန် ဟိုဘက်အသင်းက အတော်ဖိတာ ၊
ကျနော့ခမျာလည်း ရွှံ့အလူးလူးနဲ့ ၊ ယှဉ်လိုက်တိုင်း ပေါင် ၁၁၀ ကျနော်ချည်း ပစ်လဲနေတာကိုး ၊
ဒိုင် ခရာမှုတ်ခါနီး ကျနော်တို့ဂိုးဘက်မှာ ဟိုဘက်ကစားသမာက ဘောလုံးရ ကျနော်က ဝင်အဖျက် ၊
တိုက်စစ်မှုးက နောက်တန်းဆင်းကူနေရတဲ့အဖြစ် ၊
အဲသမှာ ဟိုဘက်က လှမ်းအကန် ဂိုးသမားက ထွက်အပုတ် ၊ ပြေးလာတဲ့ ကျနော့ခြေထောက်ကို လာထိ ၊
အရှိန်နဲ့ဆိုတော့ ဘယ်လိုမှ မရှောင်နိူင်ပဲ ဂိုးထဲ ဝင်သွားတာ တန်းကနဲ ၊ ဆဲလိုက်ကြတာဗျာ ၊ ကျနော့မှာ မျက်နှာဘယ်နား ထားရမှန်းမသိ ၊
ကောင်းလိုက်တဲ့ တိုက်စစ်မှုး အေပေးတိုက်စစ်မှုး ၊ ကိုယ့်ဂိုးကိုယ် သွင်းရသလား ခွေးသားရဲ့ တဲ့ ၊
ကျနော်သွင်းတဲ့ဂိုးနဲ့ ကျနော်တို့ ထွက်လိုက်ရတယ် ၊ အဲဒီကတည်းက ဘောလုံးကန်ဖို့ စိတ်နာသွားတာ အခုထိပဲပေါ့ဗျာ ၊
သြော် ဘောလုံး ဘောလုံး ၊
ငါ နဲ့ အတော် ကံမစပ်ပါလားလို့ ထင်ခဲ့ပေမယ့် ကိုရွှေကံဇာတ်ဆရာက
ကျနော့ကို ဘောလုံးလောကထဲ ရောက်အောင် ပို့လိုက်ပါသေးတယ် ၊
ဘောလုံးဝက်ဘ်ဆိုက်အတွက် ဘောလုံးသတင်း ဘာသာပြန် တဲ့ ၊
သြော် ကန်တာနဲ့ အကျိုးမပေးပေမယ့် ပြန်တာနဲ့တော့ အကျိုးပေးမှာပါလေ ဆိုပြီး
အဲဒီအလုပ်ကို ဝင်လိုက်တာ ၁၁ နှစ်ကြာ အခုထိ ဘောလုံးသတင်းတွေနဲ့ နပမ်းလုံးနေဆဲပေါ့ ၊
၂၀၀၅ နဲ့ ၂၀၀၆ မှာ ဘောလုံးပွဲကြေညာသူအဖြစ် MRTV4မှာ သွားလုပ်ခဲ့ရတာလည်း အမှတ်တရပါပဲ ၊
ဘောလုံးပွဲကြေညာရင် ဘာတွေရှောင်ရမယ်ဆိုတာ သင်ပေးခဲ့တဲ့
ကွယ်လွန်သူ အားကစားကလောင်ရှင် ဆရာကျောက်ဘီလူးတင်မောင်ဆွေ ၊
အပြောကောင်းတဲ့ ကိုနေမျိုးသူရ ( စာရေးဆရာမ လမင်းမိုမို အမျိုးသား ) တို့ကိုလည်း အမှတ်ရမိပါရဲ့ ၊
မြန်မာနိူင်ငံ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို တာဝန်ယူ လုပ်ပေးခဲ့ရတာတွေ ၊
ကွင်းထဲအထိဝင်ပြီး ဓါတ်ပုံရိုက် သတင်းယူ အင်တာဗျူး လုပ်ခဲ့ရတာတွေ သတိရစရာတွေက အများသားကိုး ၊
( အဲဒီတုန်းက အမှတ်ရစရာလေးတွေကို နောက်မှ ရေးပါဦးမယ် )
အခုတော့ ဘဝကစားပွဲမှာ ကိုယ့်ဂိုးကိုယ် မသွင်းမိအောင်
ကြိုးစားရုန်းကန်နေထိုင်ရင်း ဘောလုံးသတင်းတွေကြားမှာ ပျော်ပါးလို့ဖြင့် နေတုန်းပါ ၊
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဖတ်လို့ကောင်းတယ်။
တောင်ပေါ်သား says: :P :P :P
ဦးကျောက်ခဲ says: ဟီ ဟိ … ရယ်လိုက်ရတာ ၊ ကျောက်စ်ထက်ဆိုးသူတွေ့ပြီ…
ကျောင်းသားဘဝ အောင်ကျော်ကျော်ကန်လိုက်တဲ့ ဘော… နားထင်မှန်လို့ ဂိသွားဖူးတယ်…
အဖေကလည်း မျိုးချစ်စိတ်အပြည့်နဲ့ ဘောပွဲကြည့်လိုက်တာ အသက်ပါ ပါသွားလို့…
ဘောဆို ဝေးဝေးကပဲ နေပါတော့တယ်ဗျား… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1910
တောင်ပေါ်သား says: ကျနော်ကလည်း ကွင်းနဲ့ ဝေးဝေးမှာနေ နေသူပါ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
တကယ်လား။ ကွင်းထဲ မှာ ဆုံးသွား တယ်လား။
. ပြောသာပြော ရ။
အဲဒီလို ဖြတ်ကနဲ ဘဝချုပ် သွားတာလောက် ကုသိုလ်ကံကောင်းတာ မရှိလို့ မှတ်တာဘဲ။
ကျန်ခဲ့သူတွေအတွက်တော့ မကောင်းပေမဲ့ ကာယကံရှင် အတွက် နာခြင်း ဒုက္ခ မရှိတော့ဘူး။
ဦးကျောက်ခဲ says: အရီးရေ … အဖေဆုံးတဲ့အကြောင်းကို
“ကောင်းကင်ပြိုတဲ့ နေ့” ဆိုပြီး ပို့စ်တင်ဖူးပါတယ်ခင်ဗျာ…
အဟဲ… ကျောက်စ် ဘောမှန်ဖူးတဲ့ အကြောင်းကတော့….
“ဘော ဒဏ္ဍာရီ ……. ” တဲ့…. ဟီး ဟီး
kai says: ကောလိပ်ဂျင်နေ၀င်းလည်း.. ဘောသမားဖြစ်ပြီး.. ကန်ချက်အရမ်းပြင်းတယ်လို့ကြားဖူးသဗျ..
မြစပဲရိုး says: ကိုမျိုး ရဲ့
ဒါဆို ကျွန်မ က သာ တယ်ဗျို့။
ငယ်တုန်း က အိမ်က မျောက် တွေ နဲ့ ဘော်လုံး ကန် ပါတယ်။
မောင်နှမ ၄ယောက်မှာ ၃ယောက် က ကျား မို့ ဘောလုံးကန် ရင် လူမျှ အောင် ကျွန်မ ကို ချော့ခေါ်ကြတာ။
ကိုယ့်မှာ က လဲ သူတို့ နဲ့ မှ မကစား ရင် ကစားဖို့ လူမှ မရှိတာကို။
အဲဒီချိန် ဘောလုံးပွဲ တွေ ကို ရေဒီယို က လွှင့်တာမဟုတ်လား။
အဲဒီ ထဲ နာမည်ကြီး ဘောလုံးသမား နာမည် “ဟန်သိန်း” တဲ့။ အစ်ကို က ကျွန်မ ကို အဲဒီနာမည်ပေးတာ။
သူ့ကျ “မဟာဒူး” တဲ့။
အမေ ဆိုရင် ကျွန်မ ကို ယောကျာင်္းရှာ ဖြစ်ပြီ ကို မှတ်တော့တာ။
ကိုမျိုး ရေးတဲ့ “ဘဝကစားပွဲမှာ ကိုယ့်ဂိုးကိုယ် မသွင်းမိအောင်” ဆိုတာဖတ်ပြီး ကိုယ့်ဂိုးကို ရှူး မိ တဲ့ ဂိုး တွေ ကို လက်ချိုး ရေတွက် နေမိနေတာ
တကယ်တော့ အတော် မနည်း ဘူး ဗျ။ :-)))))
တောင်ပေါ်သား says: ကျနော်က ငယ်ငယ်ကတည်းက တစ်ယောက်ထဲနေတာ များတယ် ၊
ကာတွန်းဖတ် ပုံဆွဲပေါ့ ၊ ၉တန်း၁၀တန်း နောက်ပိုင်းကြတော့လည်း ကျောင်းပိတ်ရက်ဆို
ရေနွေးကြမ်းတစ်အိုးနဲ့ ငြိမ်းကျော် တက္ကသိုလ်နန္ဒမိတ် မောင်မိုးသူ သိန်းဖေမြင့် မြသန်းတင့် တို့ရဲ့ စာအုပ်တွေနဲ့ပဲ နေခဲ့တာ ၊
အားကစားဆိုလို့ ချက်စ်ထိုးတာရယ် ဟောလိဝုဒ်ရယ် ပိုကာဒေါင်းတာရယ်ပဲ တတ်တာ ၊ ဟီး ဟီး ၊ အဲ အဲ ကျနော်လည်း ဘဝမှာ ကိုယ့်ဂိုးကိုယ်သွင်းမိသပလေ ၊
ဆင်မလိုက်မှာ ကန်တုန်းကအကြောင်း အမေ့ကိုပြောတော့
ငါ့သားရယ် နာမည်ကျော်နိူင်ငံခြားသား ကစားသမားတွေလည်း ကိုယ့်ဂိုးကိုယ် သွင်းမိသူ ရှိတာပဲ၊ ဒါပေမယ့် ဆက်ကစားနေကြတာပဲ ၊ ပွဲတိုင်း ကိုယ့်ဂိုးကိုယ် သွင်းနေတာမှ မဟုတ်တာ တဲ့ ၊
မြစပဲရိုး says: ဟုတ်တယ်လေ ကိုမျိုး ရဲ့။
. ဘော်လုံးဆိုတာ အလုံး ကြီး ဟာကို ။ သွသူ လည်ချင်သလို လည်သွားတာ။
ဘာဖြစ်လဲ။ အခုဆို ပြောစရာလေး ကျန်ခဲ့တာ အမှတ်တရပေါ့။ မဟုတ်လား။
အနည်းဆုံး တော့ ဂိုးသွင်းဘူး ခဲ့ပြီလေ။ lol:-))))
ဦးကြောင်ကြီး says: ပါပါမျိုး တာမီးလေး၂ယောက် ကံတာခန်ခြင်လိုက်ထှာ..
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: ကျနော်တော့ ယူ၂၃က ကျောနံပါတ်ခြောက် ရှိုင်းဘိုဘို ကိုသဘောကျသဗျ
ဟိုပတ်တီးလေးတို့ ဂိုးသမားလေးတို့ မျိုးလှိုင်ဝင်းအမျိုးတို့သာ လူတွေကြားထင်ပေါ်နေတာ…
ဒီဘဲလေးကစားတာကြည့်ရတာ…. ဇာဗီဟာနန်ဒက်ဇ် လို ဗိုလ်ချုပ်လိုမျိုး…..
တောင်ပေါ်သား says: ကျနော်က သန်းသန်းထွေးလေး သဘောကျသဗျ ၊ ဒီ ၂၀၁၅ထဲ ယူ – ၁၆ ၊ ယူ – ၁၉ ခြေစစ်ပွဲတွေရှိသေးလို့ အားပေးရဦးမယ် ၊ ( ဇူလိုင် ၂၇ မှသြဂုတ်လ ၉ ရက်အထိကျင်းပမည့် အာဆီယံ ယူ-၁၆ ပြိုင်ပွဲတွင် အုပ်စု A ၌မလေးရှား၊ ဗီယက်နမ်၊ လာအို၊ တီမော၊ ဘရူနိုင်း၊ ထိုင်း အုပ်စု B တွင်သြစတြေးလျ၊ စင်င်္ကာပူ၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ မြန်မာတို့ပါဝင်သည်။
သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်မှစက်တင်ဘာ ၄ ရက်အထိကျင်းပမည့် အာဆီယံ ယူ-၁၉ ပြိုင်ပွဲတွင် အုပ်စု A ၌ ထိုင်း၊ သြစတြေးလျ၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ ဘရူနိုင်း၊ လာအို၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ အုပ်စု B တွင် မလေးရှား၊ မြန်မာ၊ စင်္ကာပူ၊ တီမော၊ ဗီယက်နမ်တို့ပါဝင်ကြသည်။ )
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: ထွေးစ့် ကို မထိနဲ့…..ထွေးစ့် က အူးလေးတို့အရွယ်ဝတ် မဟုတ်…
တောင်ပေါ်သား says: ဦးဦးမှာလည်း အသည်းနဲ့ပါ ၊ တစ်ခါတစ်လေ လူကြီးကို ဦးစားပေးပါလားကွယ် ၊
Mike says: .ဖြစ်ရမယ်..ကိုမျိုးတို့ကတော့.. .ကျုပ်လည်းဘာအားကစားမှမယ်မယ်ရရမကစားတတ်ဘူးဗျို့ 
manawphyulay says: ဘာပဲပြောပြော ဒါ ဘောလုံးနဲ့ အကျိုးပေးတယ် ခေါ်ရမှာပဲနော်… ဘောလုံးသမားတွေလိုတော့ ပိုက်ဆံ မရလောက်ဘူးပေါ့…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1910
တောင်ပေါ်သား says: ကိုမိုက်ရေ
ကျနော်က ကန်တာနဲ့ အကျိုးမပေးပေမယ့် ပြန်တာနဲ့ အကျိုးပေးလို့
အခုထိ ဘောလုံးသတင်းတွေ ဘာသာပြန်နေရတုန်း မနောရေ
ဘောလုံးသမားရဲ့ တစ်ညတာအဖြုန်းလောက်ပါပဲကွယ် ၊
အောင် မိုးသူ says: ဘောလုံးကတော့ ၀ါသနာမပါဘူး ကြည့်ရတာကော ကန်ရတာကော ဒါပေမယ့် နိုင်ငံပွဲတွေ မြန်မာပွဲတွေကိုတော့ ကြည့်တယ်။